Qualcomm dia hanolotra ny fikirakirana smartwatch vaovao amin'ny 10 septambra | Androidsis
Qualcomm no mpilalao sangany amin'ny tsenan'ny mpanodina finday miaraka amin'ireo mpikirakira Snapdragon. Na dia tsy natokana ho an'ny famokarana processeur ho an'ny telefaona fotsiny aza ilay orinasa. Izy ireo koa dia manao maodely ho an'ny famantaranandro marani-tsaina, toy ny Snapdragon 2100. Fa toa efa tonga ny fotoana hanoloana azy.
Ity mpikirakira ity dia efa nisy tamina smartwatches maro eny an-tsena. Satria, Vonona ny mpandimby azy i Qualcomm, ary afaka hihaona aminy isika afaka iray volana mahery. Satria efa nanambara hetsika fampisehoana ny volana septambra ny orinasa.
Ny orinasa amerikana dia efa namoaka afisy nanambaran'izy ireo ity hetsika ity. Hetsika izay hatao ny 10 septambra izao. Amin'izao fotoana izao dia tsy manana fampahalalana momba ny toerana hanaovana ity hetsika ity izahay. Tsy ny anaran'ny vokatra vaovao hatolotr'izy ireo ao.
Ny zavatra hitantsika amin'ny sary dia ny fametrahan'i Qualcomm famantaranandro, izay miaraka amin'ny lahatsorany, fa mazava fa processeur vaovao ho an'ny famantaranandro marani-tsaina. Toa izany ny anarany dia mety ho Snapdragon 3100, hoy ny fampitam-baovao sasany. Na dia hatreto aza dia tsy misy ny fanamafisana ny fahamarinan'ity fampahalalana ity.
Taranaka vaovao an'ny processeur Qualcomm ho an'ny famantaranandro marani-tsaina. Misaotra azy fa manantena ny hitazona ny hegemony azy eo amin'ny tsena ny orinasa. Ankoatr'izay, miaraka amina taranaka vaovao dia antenaina hatrany fa misy ny fanatsarana eo amin'ny lafiny fahombiazana sy ny fanjifana bateria. Azo antoka fa amin'ity herinandro ity dia mahazo fampahalalana bebe kokoa momba izany isika.
Amin'izao fotoana izao izahay dia efa nanao sonia ny 10 septambra teo amin'ny fandaharam-potoana. Amin'ity daty ity dia hanolotra ny processeur smartwatch vaovao Qualcomm. Ilaina ny mahita ny zavatra nomanin'ny orinasa amin'ity lafiny ity, satria tokony ho lehibe ny fanatsarana ny kalitao manoloana ny taranaka teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Qualcomm hampiditra ny processeur vaovao an'ny smartwatch amin'ny volana septambra